Uvavanyo luni lweSAT? Inkcazo, iMbali kunye neNkcazo
Funda nge-SAT kunye neNdima yalo kwiNkqubo yeeKholeji zeeKholeji
I-SAT yolu vavanyo oluqhelekileyo olulawulwa yiBhodi yeKholeji, inhlangano engenzi nzuzo eqhuba ezinye iiprogram ezibandakanya i- PSAT (yokuqala ye-SAT), i- AP (i-Advanced Placement) kunye ne-CLEP (iProjekthi yokuHlola iNqanaba leKholeji). I-SAT kunye noMTHETHO yimiba ephambili yokungena esetyenziswe iikholeji neeyunivesithi e-United States.
I-SAT kunye neNgxaki ye-"Aptitude"
Iileta ze-SAT zaqala ukuma kwiScholastic Aptitude Test.
Iingcamango "zokufaneleka," amandla okwemvelo, yinto ephambili kwimvelaphi yokuhlola. I-SAT bekufuneka ibe ngumvavanyo ovivinywe ngamakhono, kungekhona ulwazi. Ngaloo ndlela, bekufuneka ukuba ibe ngumviwo apho abafundi bebanakukwazi ukufunda, kwaye kuya kunika iikholeji ithuluzi eluncedo lokulinganisa nokuthelekiswa kwamandla abafundi abavela kwizikolo ezahlukahlukeneyo nemvelaphi.
Okwenyani, nangona kunjalo, ukuba ngaba abafundi banokwenene balungiselele uviwo kwaye ukuba uvavanyo lulinganisa into ngaphandle kokufaneleka. Akumangalisi ukuba iBhodi yeKholeji yatshintshe igama leemvavanyo kwi-Test Assessment Scholastic, kwaye kamva kuvavanyo lwe-SAT yokuHlola. Namhlanje iileta ze-SAT azimeli nhlobo. Enyanisweni, ukuguqulwa kwentsimi ye "SAT" ibalaselisa ezininzi iingxaki ezinxulumene nokuhlolwa: akukaze kucace ngokucacileyo ukuba yintoni imilinganiselo yovavanyo.
I-SAT ikhuphisana noMTHETHO, omnye uvavanyo olusetyenziswa ngokubanzi kwiikholeji ezamkelwa eMelika.
UMTHETHO, ngokungafani ne-SAT, akakaze agxile kwingcamango "yobuchule." Kunoko, umThetho uhlola oko abafundi abaye bafunda esikolweni. Ngokomlando, iimvavanyo ziye zahluka kwiindlela ezinengqiqo, kwaye abafundi abangenzi kakuhle kwiqela bangenza ngcono kwelinye. Kwiminyaka yakutshanje, uMTHETHO ukwedlula i-SAT njengeyona ndlela iqhutywe ngayo iikholeji zokungeniswa kweekholeji.
Ekuphenduleni kokubili ukulahlekelwa kwezabelo zentengiso kunye nokugxeka malunga neyona nto yolu vavanyo, i-SAT yaqalisa ukuhlolwa ngokutsha ngokupheleleyo entwasahlobo ka-2016. Ukuba unokufanisa i-SAT noMthetho namhlanje, uya kufumana ukuba Iimviwo zifana nokufana nokudlulileyo.
I-SAT yangoku iquka iinkalo ezintathu ezifunekayo kunye nencoko yokukhetha:
Ukufunda: Abathathi-vavanyo baphendula imibuzo malunga neendinyana abazifundileyo. Yonke imibuzo ikhethiweyo ezininzi kwaye isekelwe kwiindinyana. Eminye imibuzo iya kubuza malunga neetafile, iirafu kunye neetshathi, kodwa akukho matika efunekayo ukuphendula imibuzo. Ixesha elipheleleyo leli candelo: 65 imizuzu.
UkuBhala kunye noLwimi: Abathathi-vavanyo bafunda iindinyana kwaye babuzwa ukuba bachonge baze balungise iimpazamo kunye nobuthathaka kulwimi. Ixesha elipheleleyo le candelo: 35 imizuzu.
Iimathematika: Abafundi abavavanya iimvavanyo baphendula imibuzo enxulumene neentlobo zezibalo oza kuhlangana nazo kwiikholeji kunye nobomi bakho. Izihloko ziquka i-algebra, uhlalutyo lweedatha, ukusebenza ngama-equations anzima, kunye nezinye iziseko ze-trigonometry kunye nejometri. Eminye imibuzo ivumela ukusetyenziswa kwe-calculator; abanye a ba Ixesha elipheleleyo le candelo: 80 imizuzu.
I-Essential Essay: I-essay test option icela ukuba ufunde ivesi kwaye wenze ingxabano esekelwe kwinqanaba. Uya kufuna ukuxhasa ingxabano yakho nobungqina obuvela kwinqaku. Ixesha elipheleleyo le candelo: 50 imizuzu.
Ngokungafani noMTHETHO, i-SAT ayinayo icandelo elijolise kwisayensi.
Ziya kuthatha ixesha elingakanani ixesha leMviwo?
Ukuhlolwa kwe-SAT kuthatha iiyure ezingama-3 ngaphandle kwencoko yokuzikhethela. Kukho imibuzo engama-154, ngoko uza kuba nemizuzu engama-1 kunye nemizuzwana engu-10 ngombuzo ngamnye (ngokuthelekisa, umThetho unemibuzo engu-215 kwaye uza kuba nemizuzwana engama-49 ngombuzo ngamnye). Ngesincoko, i-SAT ithatha iiyure ezingama-3 kunye nemizuzu engama-50.
I-SAT ifunyenwe njani?
Ngaphambi koMatshi, ngo-2016, ukuhlolwa kwafunyanwa ngamanqaku angama-2400: amanqaku angama-200-800 wokuFunda okubalulekileyo, amanqaku angama-200-800 kwiMathematika, kunye nama-200-800 amanqaku okuBhala. Amanqaku aphakathi ayenamaqondo angama-500 kwindawo nganye kwisifundo se-1500.
Ngokuhlaziywa kwakhona koviwo ngo-2016, icandelo lokuBhala ngoku likhethiweyo, kwaye uvavanyo lufunyenwe ngamaphupha angama-1600 (njengoko libuyile ngaphambi kokuba icandelo lokubhala libe yinto efunekayo yoviwo).
Unokufumana amanqaku angama-200 ukuya kuma-800 kwisiqendu sokuFunda / ukubhala soviwo, kunye namanqaku angama-800 kwisigaba seMathe. Amanqaku afanelekileyo kwiimvavanyo zangoku i-1600, kwaye uya kufumana ukuba abafaki izicelo abaphumeleleyo kwiikholeji ezikhethiweyo zelizwe nakwiiyunivesithi banamanani kwi-1400 ukuya ku-1600.
I-SAT inikezelwa nini?
I-SAT okwangoku ilawulwa izihlandlo ezisixhenxe ngonyaka: Matshi, ngoMeyi, ngoJuni, ngo-Agasti, ngo-Oktobha, ngoNovemba noDisemba. Ukuba unombuzo wokuba uthathe i-SAT , umhla ka-Agasti, ngo-Oktobha, ngoMeyi, kunye noJuni zizona zifunyanwa kakhulu-abafundi abaninzi bathatha uvavanyo olulodwa entwasahlobo yonyaka omncinane, kwaye kwakhona ngo-Agasti okanye ngo-Oktobha wonyaka ophezulu. Kubantu abadala, umhla we-Oktobha uvavanyo lokugqibela oluya kwamkelwa kwisigqibo sokuqala kunye nezicelo zokuqala . Qinisekisa ukucwangcisa phambili kwaye ukhangele imihla yokuhlolwa kwe-SAT kunye nexesha lokubhalisa .
Qaphela ukuba ngaphambi komjikelezo we-2017-18 wokungeniswa, i-SAT ayizange ifakwe ngo-Agasti, kwaye kwakukho umhla wokuvavanywa ngoJanuwari. Utshintsho lwalulungileyo: uAgasti unikeza abadala ithuba elikhethiweyo, kwaye ngoJanuwari wawungekho umhla othandwayo kubafundi abakhulu okanye abadala.
Ngaba Ufuna Ukuthatha i-SAT?
Phantse zonke iikholeji ziya kwamkela uMTHETHO esikhundleni se-SAT. Kwakhona, iikholeji ezininzi ziyaqaphela ukuba uvavanyo olunzulu oluxinzelelweyo oluphambili aluyona mlinganiso ophezulu kumntu ofake isicelo. Enyanisweni, uphando lwe-SAT lubonise ukuba uvavanyo luchaza umvuzo wentsapho yomfundi ngokuchanekileyo kunokuba uqikelele ukuphumelela kwikholeji yakhe yangaphambili. Iikholeji ezingaphezu kwe- 850 ngoku zi-test-optional admissions , kwaye uluhlu luyaqhubeka lukhula.
Gcina nje ukhumbule ukuba izikolo ezingasebenzisi iSAT okanye UMTHETHO kwiinjongo zokungeniswa zingasasebenzisa iimviwo zokunikezela iibhasari. Abadlali bee-Athletes kufuneka bahlolisise neemfuno ze-NCAA zeemvavanyo zokulinganisa ezilinganiselweyo.
Ingakanani i-SAT inomsebenzi?
Kwiikholeji zokuzivocavoca ezikhankanywe ngasentla, uviwo alufanele ludlale naluphi na indima kwisigqibo sokwamkelwa kwabaviwa xa ukhetha ukungenise izikolo. Kwezinye izikolo, unokufumana ukuba iikholeji ezininzi ezikhethiweyo zelizwe ziphazamisa ukubaluleka kweemvavanyo eziqhelekileyo. Ezi zikolo ziyakwamkelwa ngokupheleleyo kwaye zisebenze ukuvavanya wonke umntu ofake isicelo, kungekuphela kwedatha yolwazi. Iimvavanyo , iincwadi zokucebisa, udliwano-ndlebe , kunye neyona nto ibaluleke kakhulu, amabakala amahle kwiikhosi ezinzima zizo zonke izicwangciso ze-equation equation.
Oko kwathiwa, i-SAT kunye ne-ACT izikolo zivakaliswe kwiSebe lezeMfundo, kwaye zihlala zisetyenziswe njengomlinganiselo kwizithuba ezinjengezo zipapashwe yi- US News & World Report . Umgangatho ophezulu we-SAT kunye ne-ACT izikolo zilingana nezikhundla eziphezulu zesikolo kunye nodumo oluphezulu. Ukunyaniseka kukuba izikolo eziphezulu ze-SAT zandisa amathuba akho okumkelwa kwiikholeji ezikhethiweyo kunye neeyunivesithi. Ngaba ungangena ngee-SAT izikolo eziphantsi? Mhlawumbi, kodwa iingxaki zichasene nawe. Amanqaku angaphantsi kweyabhalisile abafundi abonisa oku:
Iziphumo zeSAT zeeKholeji eziPhezulu (phakathi kwama-50%)
Ntsundu 660 760 670 780 670 770
UCarleton 660 750 680 770 660 750
IHarvard 700 800 710 800 710 800
EStanford 680 780 700 790 690 780
KwiYunivesithi yaseMichigan 620 720 660 760 630 730
Yunivesithi yaseVirginia 620 720 630 740 620 720
Kwinqanaba elongezelelweyo, ngokucacileyo awudingi ama-800 afanelekileyo ukuba angene kwiiyunivesithi ezikhethekileyo ezinjengeHarvard neStanford. Ngakolunye uhlangothi, akunakwenzeka ukuba ungene ngeenqaku eziphantsi kakhulu kunezo zidweliswe kwiikholomu ezingama-25 ze-percentile ngenhla.
I-SAT ihlala iqhubeka, kwaye uvavanyo oya kuthatha luhluke kakhulu kulowo obazali bakho bathathe, kwaye ukuhlolwa okwangoku akufani kakhulu nokuhlolwa kwangaphambi ko-2016. Kulungile okanye kakubi, i-SAT (kunye ne-ACT) ihlala iyingxenye ebalulekileyo yekholeji yokwamkelwa ngokulinganayo kwininzi yeekholeji zeminyaka emine. Ukuba isikolo sakho sephupha sinobhengezo olukhethiweyo, uya kucebiswa ukuba uthathe uvavanyo olunzulu. Ukuchitha ixesha kunye nesikhokelo sokufunda kunye nokuvavanya ukuvavanya kunokukunceda ukuba uqhelane novavanyo kunye nolunye usuku olulungelelweyo oluzayo.
UMQATHELO WENKQUBO YOKWENZISWA KWEENKQUBO ZOKWENZISWA KWEKholeji zaseKentucky
Yayiyiphi 'indawo yeThathu'?
Ukusebenzisa i- 'Fin'
I-Starfish Prime: Uvavanyo lweNyukliya enkulu kunazo zonke kwi-Space
AbaGitari bamaBass Beginner
Yiyiphi "iJuno" Itshoyo malunga nokukhulelwa kwentsha, ukukhupha isisu nokukhetha
Intombi yamandla: Ukuba ngumntwana kwiLizwe likaThixo
Amagama okuHlanganisa, iiNgqungquthela, kunye namaCandelo ngesiNgesi ngegrama
I-Mousterian - I-Technology Age yobuGcisa boBugcisa obuNokuthi bube nzima
Ukuhlalutya 'Umntu Olungileyo Unzima Ukufumana' nguFlannery O'Connor
Iyini inkonzo yokubuyisana?